Hdmi Extender, Hdmi Switcher, Wireless 4k Hdmi Extender - Brocade Boka
Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.yakanyoreswa kiyi bhizinesi muSichuan Province, China, uye iri chikamu chechirongwa chikuru chekudyara cheiyo High Tech Zone muChengdu. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kusanganisira yakakwira-tsananguro vhidhiyo switch uye nevanozvigovera, uye yakakwira-tsananguro isingakuvadze kure-kure-chaiko-nguva kutapurirana zvigadzirwa
Indasitiri-inotungamira yakazvimirira yepamoyo tekinoroji uye kutsigira kutsvagisa nekusimudzira kugona, ine huwandu hwakawanda hwekugadzira patent uye zvitsva zvigadzirwa zvepamutemo. Breakthrough real-time yakakwira-tsananguro odhiyo uye vhidhiyo yekufambisa matekinoroji senge kududzirwa kwepamusoro, resolution yepamusoro, zero kunonoka, kuderera kwesimba simba, kureba, nezvimwewo, uye yakazvipira kupa michina yehunyanzvi uye mhinduro kune vatengi kutenderera pasirese.
Brocade Zhizhi akateedzana zvigadzirwa zvinonyanya kusanganisira yakakwira-tsananguro isina kurasikirwa-kureba-chaiko-nguva kutapurirana, pamwe neepamusoro-tsananguro odhiyo uye vhidhiyo switching uye kugovera. Ivo anoshandiswa zvakanyanya muHDMI odhiyo-inoona indasitiri, multimedia kudzidzisa, vhidhiyo uye nhare dzemisangano, hombe-skrini kuratidzira, kuratidzira, mari uye kwesainzi, uye firimu neterevhizheni Kupfura uye dzimwe nzvimbo dzakamira.
Kuvavarira kuvaka yekutanga-kirasi hunyanzvi bhizinesi.